Jet Mill Factory | China Jet Mill Mpanamboatra sy mpamatsy
Ny milina Fluidized-bed Jet dia fitaovana toy izany izay mampiasa ny haingam-pandeha haingam-pandeha hanatanterahana ilay karazana maintso mahery vaika. Atosiky ny rivotra voahidy, ny akora dia hafafaingana amin'ny fiampitana ny nozera efatra mba ho voadona sy hatosiky ny rivotra miakatra mankany amin'ny faritra fitotoana, voataona
Tsy misy fiakaran'ny maripana: tsy hitombo ny maripana satria potipotika ny fitaovana ao anatin'ny fepetra miasa amin'ny fanitarana pnemika ary ny mari-pana ao amin'ny lavaka famaritana dia mitazona ara-dalàna.
Ny rafitra fiarovan'ny fiaramanidina fiarovana Nitrogen dia mampiasa ny gazy Nitrogen ho fampitam-baovao amin'ny fitrandrahana pneumatika hanatanterahana fanodinana faribolana maina.
Jet Mill ampiasaina ao amin'ny Lab, izay ny fotokeviny dia: entin'ny rivotra tsindry amin'ny alàlan'ny tsindrona sakafo, ny akora nohamafisina ho hafainganam-pandeha ultrasonic ary atsofoka ao amin'ny efitranon'ny fikosoham-bary amin'ny lalana azo tsapain-tanana, nifandona ary nopotehina.
Voalohany, sakafo ara-nofo avy amin'ny mpamatsy - ny famindrana fitaovana ho an'ny 3 m3mixer voalohany ho an'ny fanaovana premixing, ary ny mpanangona vovoka dia hanangona vovoka mandritra ny fizotran'ny fihinanana, avy eo ny fivarotana hopper 3m3 dia hampidirina ao anaty fikosoham-bary ho an'ny fikosoham-bary.